Sida loogu isticmaalo qolka | Ota Ward Hall Aplico
Codsiga bakhtiyaanasiibka xarunta
Qolalka lagu calaamadeeyay *, habka bakhtiyaa nasiibka ayaa loo badalay si looga hortago infekshanada cusub ee coronavirus.
Halkan guji si aad u hesho faahfaahin ku saabsan habka bakhtiyaanasiibka
※Qolka carwada (waxaa loo isticmaalaa kulamada)
※Hoolka / qolka bandhiga yar (isticmaalka carwada)
Istuudiyaha A / B
Habka bakhtiyaa-nasiibka Fagaaraha Daejeon Citizen Ka qayb qaado bakhtiyaanasiibka hool yar.
* Goobta bakhtiyaanasiibka ayaa noqon doonta Ota Citizen's Plaza.
Ota Ward Hall Aplico, maahan goob gooni ahFadlan ogow inay noqon doonto.
* Laguma dabaqi karo Shabakada Uguisu Net Shabakada Warbler
Habka muddada dalabka Qaabilaada waxaa laga aqbalaa Ota Ward Plaza Small Hall laga bilaabo 1:20 pm ilaa 2:XNUMX pm maalinta bakhtiyaanasiibka.
(Bakhtiyaa nasiibka wuxuu bilaabmaa 2:XNUMX pm) Qaabilaada waxaa laga aqbalaa Ota Ward Plaza Small Hall laga bilaabo 9:20 am ilaa 10:XNUMX am maalinta bakhtiyaanasiibka.
(Bakhtiyaa-nasiibka ayaa bilaabmaya 10-ka subaxnimo) Laga bilaabo 4-ka illaa dhammaadka bisha, afar bilood ka hor bisha isticmaalka, ka dalbo ugu Ugu Net, Ota Ward Hall Aplico, ama daaqadda xarunta kulanka ee Ota Ward.
Taariikhda bakhtiyaanasiibka Hal maalin hal sano ka hor bisha isticmaalka
(Janaayo kaliya 1) 6 maalin 1 bilood kahor bisha isticmaalka
(Janaayo kaliya 1) 3 maalin 1 bilood kahor bisha isticmaalka
(Janaayo kaliya 1)
Ku guuleysiga muddada xaqiijinta Midna Laga bilaabo maalinta ku xigta maalinta bakhtiyaa-nasiibka illaa 7-aad ee isla bishaas, ka hubi natiijooyinka bakhtiyaa-nasiibka ugu Ugu Net Net.
(Si otomaatig ah ayaa loo joojinayaa muddada ka dib)
Adeegsiga / waqtiga kama dambaysta ah ee isticmaalka Laga bilaabo taariikhda bakhtiyaa-nasiibka illaa 20-ka isla bishaas
(Si otomaatig ah ayaa loo joojinayaa muddada ka dib) Laga bilaabo maalinta xigta maalinta bakhtiyaa-nasiibka illaa 15-aad ee isla bishaas
Goobta soo dhaweynta arjiga / waqtiga soo dhaweynta Ota Ward Hall Aplico
Laga bilaabo 9:7 aroornimo ilaa XNUMX:XNUMX pm
(Maalin kasta marka laga reebo maalmaha xiran) ・ Ota Ward Hall Aplico
9:7 subaxnimo ilaa XNUMX:XNUMX pm (maalin kasta marka laga reebo maalmaha xiran)
Facility Xarun kasta oo ku taal qaybta: 9:7 subaxnimo ilaa XNUMX:XNUMX pm
Codsiga xarumaha banaan
Muddada dalabka isticmaalka Laga bilaabo maalinta ka dambaysa taariikhda bakhtiyaanasiibka illaa 14 maalmood ka hor taariikhda isticmaalka Laga bilaabo maalinta ka dambaysa taariikhda bakhtiyaanasiibka illaa 7 maalmood ka hor taariikhda isticmaalka Laga bilaabo 3-da bisha 8 bilood ka hor bisha isticmaalka ilaa maalinta isticmaalka
Adeegsiga / waqtiga kama dambaysta ah ee isticmaalka Fadlan bixi waqtiga codsiga. 1. Haddii aad wax ku dalbato khadka tooska ah, fadlan ku bixi 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda codsiga.
2. Haddii aad ka dalbatay miiska, fadlan bixi waqtiga dalabka. * Haddii aad codsato laga bilaabo 2 maalmood kahor taariikhda isticmaalka maalinta isticmaalka, kaliya Ota Ward Hall Aplico ayaa la heli karaa.
Uguisu Net waa naanaysta nidaamka kombiyuutarka ee isticmaala xarumaha dadweynaha ee Ota Ward.
Markii hore aad isdiiwaangalisid, waxaad awoodi doontaa inaad dalbato bakhtiyaa-nasiibka xarumaha dadweynaha adoo adeegsanaya taleefan ka jawaabaya taleefanka, taleefanka gacanta, ama internetka, ama waxaad u sii ballansan kartaa xarumaha banaan.Intaas waxaa sii dheer, xitaa kuwa aan isdiiwaangalin waxay ogaan karaan helitaanka tas-hiilaadka taleefannada ka jawaabaya codka, internetka, iyo muuqaal-wadaagga
Macluumaad ku saabsan sida loo diiwaan geliyo iyo sida loo istcimaalo, fiiri "Uguisu Net Guidebook" ama Bogga Uguisu Net.
Macluumaadka Nidaamka Adeegsiga Xarunta Dadweynaha ee Ota Ward (Uguisu Net) (Ota Ward Office Homepage)
Dayactirka / kormeerka / nadiifinta xiran / ku meelgaarka uxiran